5050-7000mAh Factory, mpamatsy - China 5050-7000mAh mpanamboatra
Li-po Battery XRF001 6200mAh 7.2V Solosaina finday avo lenta amin'ny laptop, X-ray
Ny batterie PLM-XRF001 7.2V 6200mAh dia mampiasa fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Gasikara lefika bita iray vita amin'ny solika fandefasana entona mandavantaire
Ny batterie PLM-ERT-06 3.7V 6000mAh dia mampiasa fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatrany avo indrindra mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Detector leakà entona Single Battery Leak Alarm Battery 103450-3P 3.8V 6000mAh Polymer Lithium batterie ho an'ny Detector Gas Composite
Ny bateria PLM-103450-3P 3.8V 6000mAh azo ampiasaina indray dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.